समाचार Archives - Cyber News
Nov42017 by प्रदिपNo Comments
सीपी मैनालीका श्रीमान–श्रीमती नै समानुपतिक सूचीमा
१८ कात्तिक, काठमाडौं । नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनाली वाम गठबन्धनमा छैनन् । विगतमा उनको पार्टीबाट समानुपातिक सांसद बनेका अइन्द्रसुन्दर नेम्वाङ लगायतका नेताहरु एमालेको समानुपातिक सूचीमा छन् । तर, पार्टी जति सानो बन्दै गए पनि मैनालीले यस वर्ष पनि समानुपातिकको सूचीमा आफू र आफ्नी पत्नी निलम खड्कालाई समेत समेटेका छन् । दोस्रो संविधानसभामा पनि मैनाली दम्पती पार्टी कार्यकर्ताको भोटबाट सांसद बनेका थिए । र, उनीहरु पालैपालो मन्त्रीसमेत बने । निर्वाचन कानूनले थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरिसकेका अवस्थामा पनि केही साना पार्टीहरु समानुपातिकतर्फबाट सांसद बन्न पाइने आशमा छन् । यही आशमा रहेका नेकपा मालेका महासचिव मैनालीले आफ्नो नाम समानुपातिकको तेस्रो नम्बरमा राखेका छन् । पत्नी निलम केसीको नाम १८ औं नम्बरमा छ । हँसिया र तारा चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचन लड्ने नेकपा माले र जनसमाजवादी दुबैले प्रतिनिधिस
१८ कात्तिक, पोखरा । दुई भारतीय काठमाडौंको कमलादीबाट पेस्तोलसहित पक्राउ परेको घटना सेलाउन नपाउँदै प्रहरीले ३ भारतीय सुटरसहित १ नेपालीलाई पोखराबाट पक्राउ गरेको छ । नेपाल प्रहरीले शुक्रबार साँझ पोखराको सिद्धार्थ चोकमा सामान किन्दै गरेको अवस्थामा उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो । पक्राउ परेकाको परिचय भने प्रहरीले खुलाएको छैन । कास्की प्रहरी स्रोतले भारतको राजस्थानमा आतंक मच्चाएर नेपाल छिरेका ३ भारतीय सुटर पक्राउ परेको जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार, पक्राउ परेका ३ भारतीय हप्ता असुलीदेखि हत्यासम्मका आरोपमा मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिहरु हुन् । ४ भन्दा धेरैै हत्या आरोप र २५ भन्दा धेरै असुलीका मुद्दा उनीहरुमाथि रहेको प्रहरी दाबी छ । भारतको राजस्थान प्रहरीले नेपालको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोलाई उनीहरुको बारेमा जानकारी गराएर खोजी गरिदिन केही समयदेखि आग्रह गर्दै आइरहेको थियो ।भारतले आग्रह गरेको केह
जनतासँग क्षमा माग्दै गगनले थाले चुनावी अभियान
१८ कात्तिक, काठमाडौं । काठमाडौं ४ का कांग्रेसका प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार गगन थापाले जनतासँग क्षमा माग्दै चुनावी अभियान सुरु गरेका छन् । प्रदेशसभाका उम्मेदवारद्वय नरोत्तम बैद्य र साधुराम खड्कासहित थापाले चावहिलबाट चुनावी अभियान थालेका हुन् । चार वर्षमा अन्य सांसदहरुको तुलाना आफूले कार्यालय नै खडा गरेर काम गरेको भन्दै उनले फेहरिस्ता सुनाए । यद्यपि धेरै गर्न सकिन्थ्यो भन्दै जनतासँग क्षमा मादै भने, ‘अझ राम्रो गर्न सकेको भए मलाई जति आनन्द कसलाई लाग्थ्यो होला र । तर, सबै मेरो वसमा छैन ।’ उनले आफू हाउजिङमा बसेर बेलाबेला घुम्म आउन सांसद नभएको भन्दै जनताको सुखदुःखप्रति जानकार रहेको बताए । चुनावी प्रतिपर्धामा रहेका एमाले नेता राजन भट्टराईलाई सालिन युवा भन्दै गगनले आफ्ना कुरा राख्न आग्रह गरे । सांसद नभएका व्यक्तिले चार वर्ष गगन थापाले के गर्‍यो भन्न पाएपछि सँगै सांसद रहेका भट्टराईले न
बलिउडका नायिकाहरुबीच आपसी सम्वन्ध त्यति राम्रो छैन । कसैको फिल्म खोसेको निहुँमा त कसैको व्वाइफ्रेण्ड खोसेको निहुँमा एक-अर्कालाई फुटेको आँखाले पनि हेर्न सक्दैनन् । तर, दीपिका पादुकोण र आलिया भट्टको कुरा अलग छ । उनीहरु एक-अर्काको प्रशंसा गरेर थाक्दैनन् । दीपिकाको नयाँ फिल्म पद्मावतीको ट्रेलर हालै सार्वजनिक भएको छ । आलियाले उक्त ट्रेलरलाई लिएर दीपिकाको जमेर प्रशंसा गरिन् । एउटा पोडकास्टमा आलियाले दीपिकाको बारेमा भनिन्, ‘पद्मावतीको रुपमा दीपिका साह्रै राम्री देखिएकी छिन् । मलाई थाहा छ कि म कहिल्यै उनीजस्तो देखिन सक्दिन । न उनीजस्तो गर्न नै सक्छु । दीपिका विलकुल रानीजस्ती देखिएकी छिन् । मलाई विश्वास छ उनले फिल्ममा काम पनि शानदार गरेकी छिन् ।’ यसमा दीपिकाले टि्वट गर्दै आलियालाई जवाफ दिएकी थिइन् । उनले लेखिन्, ‘माइ आलू… यू मेक नो सेन्स… लभ यू ।’ तर, त्योभन्दा दुई कदम अघि बढेर दीपिकाले आलियाला
बुद्ध लामाले आफ्नो जीवनमा गरेका संघर्षहरु । Buddha Lama First Nepal Idol (बुद्ध लामाको मनछुने अभिव्यक्ति)
बुद्ध लामाले आफ्नो जीवनमा गरेका संघर्षहरु । Buddha Lama First Nepal Idol (बुद्ध लामाको मनछुने अभिव्यक्ति) Buddha lama the title winner of nepal idol season 1st . Buddha lama orginally from dhading and lives in pokhora. Buddha lama discribe the history and time period of his life from past to present. He describe his life in short. He strugglealot to.get success of nepal idol. Finally Buddha Lama is the first Nepal Idol. He has faced the different challenges in the show from last3weeks in the media but finally he is the winner of the popular TV show Nepal Idol. Nepal Idol isaNepali reality television singing competition that is part of the Idols franchise created by Simon Fuller and owned by Entertainment and FremantleMedia.Buddha Lama as well as Nishan and Pratap has presented
चिनियाँ नागरिकलाई नागरिकताको लागि सिफारिस गर्ने महानगरका वडा सचिव पौडेल पक्राउ
कार्तिक १७, २०७४-चिनियाँ नागरिकलाई नागरिकताका लागि सिफारिस गरेको आरोपमा प्रहरीले काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ११ का सचिव रामप्रसाद पौडेललाई पक्राउ गरेको छ । चिनियाँ नागरिक कुङगा तेन्जिङ भुटियाले तेन्जिङ लामाको नाममा वंशजको आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट नागरिक लिएका हुन् । कुङगाले नेपाली पासपोर्टसमेत लिइसकेका छन् । प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सिआइवी) ले कुङगा, पौडेल र नागरिकता बनाउन सहयोग गर्ने कर्मा धिन्डुप घलेलाई पक्राउ गरेको छ । चिनियाँ नागरिक कुङगा कपडा व्यपारसँग आवद्ध छन् । केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो प्रमुख पुष्कर कार्कीले पौडेल र घलेले कुङगाबाट मोटो रकम लिएर नागरिक बनाउन सहयोग गरेको बताए । पौडेल अघिका वडा सचिव युवराज खनालले कुङगालाई नेपाली नागरिकरुपमा जन्म दर्ता गराएका थिए । महानगरका अनुसार सिआइबीले खनालको खोजीकार्य तीव्ररुप अघि बढाएको छ । ‘पक्राउको लागि सहय
८८ किलो सुनकाण्डः ११ आरोपीविरुद्ध साढे ४३ करोडको बिगो माग गर्दै मुद्दा दायर
१८ कात्तिक, काठमाडौं । ८८ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न भनिएका ११ जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । शुक्रवार महानगरीय प्रहरी परिसरको अपराध अनुसनधान तथा कारवाही शाखाले अबैध सुन प्रकरणका अभियुक्तविरुद्ध ४३ करोड ५६ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो । महानगरीय अपराध महाशाखाले गत १९ भदौमा केरुङ नाका हुँदै भित्रिएको ८८ किलो सुन ठमेलबाट बरामद गरेको थियो । संगठित अपराध ऐनअनुसार उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको परिसरले जनाएको छ । अभियुक्तविरुद्ध संगठित अपराध ऐनअनुसार ५ वर्षसम्मको कैद सजाय माग गरिएको छ । को-को विरुद्ध मुद्दा ? परिसरले शुभरत्न शाक्य, गणेशदत्त बडु, सत्यनारायाण अग्रवाल, नन्दकुमार पाण्डुरंग मगर्ले, उल्लाहास दिनकर लालुङ्गे, मानबहादुर तामाङ र ल्याक्पा ग्याल्जोङविरुद्ध परिसरले मुद्दा दायर गरेको हो । त्यस्तै, चिनियाँ नागरीक याङ वे मिङ, प